Etu esi ewepu onodu TV njikere 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ndị na-ekiri TV n'ụlọ na-ahụkarị na mgbe oge ụfọdụ na-enweghị ọrụ, TV na-agbanyụ na-akpaghị aka wee banye n'ọnọdụ njikere, dị ka a ga - asị na anyị pịa bọtịnụ uhie na njikwa. Mgbe nke a mere, anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ma chee na igwe onyonyo mebiri emebi: ọ bụ omume nkịtị, nke ndị na-emepụta TV na-echekwa iji chekwaa ike mgbe TV na-enweghị onye ọ bụla na-agbanwe ọwa ma ọ bụ na-arụ ọrụ ọ bụla ọzọ maka ogologo oge (na-emekarị mgbe awa 2).
Ọ bụrụ na omume a anaghị amasị anyị ma ọ bụ chọọ ikiri telivishọn na-enweghị nkwụsị ọbụlagodi ihe karịrị awa 3, na ntuziaka a anyị ga-egosi gị esi ewepu mode njikere na TV nke isi TV, ka i wee nwee ike ijikwa ọnọdụ nchedo akpaka na ọnọdụ ụfọdụ ma ọ bụ n'ọnọdụ ụfọdụ ebe achọrọ TV mgbe niile (dịka ọmụmaatụ, TV na ụlọ ahịa, TV nke na-eme ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ okenye ma obu nwata).
Otu esi gbanyụọ ọnọdụ nọrọ na njikere na TV
Dị ka e kwuru na nyocha ahụ, a na-enye atụmatụ njikere na-akpaghị aka na TV niile nke oge a na smart TV iji mee ka ọ dị mfe ịchekwa ike mgbe ịhapụ maka ogologo oge na-enweghị mkparịta ụka. Agbanyeghị, ndị nrụpụta ọ bụla na-enye gị ohere ịmezi ọrụ a (na-abawanye oge nchere) yana kwa site gbanyụọ ya kpamkpam, ya mere ị pụrụ ịnụ ụtọ na-akparaghị ókè TV. N'okwu nke ikpeazụ, agbanyeghị, cheta ka ịgbanyụ ya site n'oge ruo n'oge yana ihe ntanetị, iji chekwaa ike na ịgbatị ndụ ngwa ahụ.
Wepu LG TV site na ọnọdụ njikere
Ọ bụrụ na anyị nwere LG smart TV anyị nwere ike wepu ọnọdụ nchekwa akpaka site na ịpị bọtịnụ gia na njikwa, ọ na-ewe ya na menu Ntọala niile, họrọ menu General na n’ikpeazụ pịa na mmewere Oge.
Na ọhụrụ window na-emepe, anyị deactivate item Aapụ mgbe awa 2 gachara na ịpị ya na, ọ bụrụ na anyị setịpụrụ oge nkwụsị oge dị iche, anyị na-enyocha na menu Gbanyụọ ngụ oge, na-ahụ na edoziri ihe ahụ Kwụsị. N'aka nke ọzọ, anyị nwekwara ike ịchọpụta olu ahụ Ọnọdụ eco (ugbu a na menu General) ma ọ bụrụ na olu na-arụ ọrụ Mwepu akpaaka, ya mere i nwere ike gbanyụọ ya.
Wepu Samsung TV na njikere
Samsung TVs na-ewu ewu nke ukwuu na ọtụtụ ndị ọrụ ga-ahụrịrị ma ọ dịkarịa ala otu oge ọnọdụ akpaka na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ n ’n’etiti ndị chọrọ ịkwụsị ya, anyị nwere ike ịga n’ihu site na ịpị bọtịnụ ahụ menu nke ime-ime, na-eduga anyị n'okporo ụzọ General -> Nchịkwa sistemụ -> Oge -> Oge ụra na ịlele ma ọ bụrụ na ihe Ntọala nwere nkwarụ (a ga-etinye ya na awa 2 na ndabara: ka anyị gbanwee ntọala ahụ Gbanyụọ).
Ọ bụrụ na usoro dị n'elu adịghị arụ ọrụ, anyị kwesịrị ịlele ma ọ bụrụ na njikwa njikere dị na ntọala nchekwa ike. Continuega n'ihu anyị na-emeghe menuka anyị were ya Green ngwọta ma ọ bụ General -> Usoro obibi ma lelee ma olu dị na-arụ ọrụ Mwepu akpaaka, ka o wee nwee nkwarụ na-adịgide adịgide.
Tinye Sony TV na ọnọdụ ịnọ na njikere
Sony TV nwere ike ịnwe ma sistemu eji arụ ọrụ yana gam akporo TV ọhụrụ: sistemụ abụọ na-echekwa ike ma na-akpaghị aka na njikere mgbe oge ụfọdụ na-enweghị ntinye. Iji gbanyụọ njikere na Sony TV na-enweghị gam akporo TV, pịa bọtịnụ Home / NchNhr na ntanetị, ka anyị were okporo ụzọ Ntọala sistemụ -> Eco ma lelee ma ọ bụrụ na ịnọ na njikere TV na-adịghị arụ ọrụ, ya mere anyị nwere ike iwepu ya.
Ọ bụrụ na anyị nwere telivishọn Sony nwere gam akporo TV, anyị na-pịa bọtịnụ ahụ Casaka anyị were ụzọ ahụ Ntọala -> Ike -> Eco ma gbanyụọ ọnọdụ nọrọ na njikere. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ ma ọ bụ ihuenyo ahụ agbanyụ ọzọ mgbe oge ụfọdụ gasị, anyị ga-enyocha nhazi nke Nrọ, ihe ngosi gam akporo nke na egosiputa ihe ngebichi ma oburu na adighi oru. Iji gaa n'ihu, ka anyị were okporo ụzọ Ntọala -> TV -> Nrọ ma hụ na n'akụkụ ihe mmewere Mgbe ị na-ehi ụra olu dị Ike.
Sonyfọdụ Sony smart TV nwere oge a nwekwara ihe mmetụta dị adị, nke na-achọpụta ọnụnọ ndị mmadụ n'ihu TV na, ọ bụrụ na nyocha adịghị mma, na-etinye TV na ọnọdụ njikere. Enwere ike ịme nkwarụ a site na ịpị bọtịnụ NchNhr, na-akpọrọ anyị n'ụzọ. Ntọala -> Ntọala sistemụ -> Eco -> Ọnọdụ ihe mmetụta ma tọọ ihe ahụ Gbanyụọ.
Wepu Philips TV na njikere
Philips TV nwekwara ike ịgụnye sistemu arụmọrụ ma ọ bụ gam akporo TV, yabụ anyị ga-aga n'ihu n'ụzọ dị iche. Maka ndị nwere TV TV na-enweghị gam akporo TV, ọ ga-ekwe omume ịkagbu ọnọdụ nọrọ na njikere site na ịpị bọtịnụ ahụ NchNhr / Ulo na ntanetị, na-emeghe menu Ọpụrụiche O General, ịpị elu Oge ma mechaa meghee ọnụ ụzọ ahụ Gbanyụọ, ebe anyị ga-ahazi ọrụ ahụ Gbanyụọ.
Ọ bụrụ na Philips TV ka ọhụrụ, anyị nwere ike wepu ọnọdụ nọrọ na njikere site na ịpị bọtịnụ ahụ menu, na-eduga anyị n'okporo ụzọ Ntọala -> Ntọala Eco -> Oge Nhi ụra ma tọọ oge maka 0 (efu).
Wepu Panasonic TV na ọnọdụ njikere
Ọ bụrụ na anyị nwere TV Panasonic nke na-agbanyụ mgbe oge ụfọdụ gasịrị, anyị nwere ike idozi ya site na ịpị bọtịnụ ahụ Oge (nke dị n'ọtụtụ ụdị njikwa Panasonic dịpụrụ adịpụ) na, na menu ọhụrụ nke ga-emeghe, ihe niile anyị ga - eme bụ ịkwụsị ihe ahụ Akpaaka njide.
Ọ bụ na enwereghị bọtịnụ ngụ oge na njikwa Panasonic TV anyị? Na nke a, anyị nwere ike wepu njikere na-eso usoro kpochapụwo, nke gụnyere ịpị bọtịnụ ahụ menu na n'ime ime obodo akara, imeghe ngụ oge menu na setịpụrụ Nchekwa onwe Ike ka Gbanyụọ ma ọ bụ ya 0 (efu)
Ọ bụrụ na njikere TV na-enye anyị nsogbu mgbe anyị na-ekiri ihe nkiri dị ogologo ma ọ bụ n'oge nnọkọ siri ike (ya bụ, mgbe anyị na-ekiri ọtụtụ usoro nke usoro TV na-aga n'ihu), iwepụ ọnọdụ njikere nwere ike ịbụ azịza dị irè. yabụ na ị gaghị emetụ igwe ntanetị aka. ọ dịkarịa ala otu ugboro n'otu awa ka telivishọn "wee ghọta" na anyị nọ na anyị na - ele ihe. Ekele maka ndu a anyị nwere ike gbanyụọ njikere na telivishọn nke ụdị ndị bụ isi, mana usoro anyị gosipụtara gị nwere ike igwu na TV ọ bụla ọ bụlaAnyị ga-ewere naanị njikwa dịpụrụ adịpụ, tinye ntọala ma lelee mmewere ọ bụla metụtara mmechi akpaka nke telivishọn: Njikere, nchekwa ike, Eco, Eco Mode or Timer.
Ọtụtụ usoro njikere gbanwere dabere na sistemụ arụnyere; Iji ghọta ihe usoro anyị nwere n'ihu na otu esi aga n'ihu, anyị na-akwado ka ị gụọ ntuziaka anyị Etu esi amata ma ọ bụ Smart TV mi Smart TV kacha mma maka Samsung, Sony na LG App Sistem.
Ànyị nwere nsogbu na ọnọdụ njikere ma ọ bụ mechie PC? N'okwu a, anyị na-atụ aro ka ime ka mkparịta ụka ahụ miri emi site n'ịgụ isiokwu anyị. Nkwusioru na ezumike nke kọmputa: esemokwu na ojiji.